फेरि लकडाउन हुन्छ ? कात्तिक १ देखि सरकारी कार्यालय के हुन्छ ? - Sacho Post
फेरि लकडाउन हुन्छ ? कात्तिक १ देखि सरकारी कार्यालय के हुन्छ ?
२०७७ आश्विन २७, मंगलवार ०९:१३ बजे
सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पहिलेकैजस्तो मुलुकव्यापी लकडाउनको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले बाह्रखरीले ज्ञवालीसँग लकडाउनको सम्भावनाबारे संङ्क्षिप्त कुराकानी गरेको थियो । जवाफमा ज्ञवालीले सरकारले अहिले त्यस्तो सोच नबनाएको, विकल्पका बारेमा विज्ञहरूको राय–सुझाव लिइरहेको बताएका हुन् ।
“अहिले लकडाउनका सम्बन्धमा केही पनि निर्णय भएको छैन । योजना पनि बनेको छैन । सरकार त्यसो गर्न पनि चाहँदैन,”उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय काठमाडौंमा चुनौती थपिँदै गयो ।” उनले काठमाडौंमा चुनौती थपिनुमा तीन–चारवटा कारण रहेको औंल्याए । सार्वजनिक यातायातमा भीडभाड बढेको र सङ्क्रमण फैलिएको हुनसक्ने उनले औंल्याए ।
त्यस्तै बजार क्षेत्र, सडकमा हुने धर्ना, नाराबाजी, जुलुस आदिले पनि सङ्क्रमण फैलाउन मद्दत गरेको उनको भनाइ छ ।
“यी सबै कारणले कुल सङ्क्रमितको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपत्यकाकै भएको र यो चुनौतीपूर्ण देएिको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “यसबारे हामीले विभिन्न कोणबाट अध्ययनहरू गरिरहेका छौं । विज्ञका सुझाव लिइरहेका छौं । अहिले पनि हाम्रो विश्वास, स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना भयो भने, सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेट गरेर राख्न सक्ने हो भने नियन्त्रणभित्रै छ । यही क्रम बढ्दै गए सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा गुणात्मक वृद्धि आउँछ । योप्रति चिन्ता हो । तथापि, लकडाउनको सोच बनेको भने छैन ।”
उनले कात्तिक १ गतदेनि सेवाग्राहीहरूको घुइँचो लाग्ने सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने कि भनेर पनि सुझाव आएको बताए ।
“सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा भीडभाड बढेको छ । त्यसलाई केही ढिला गर्दैमा बिग्रिइहाल्दैन भनेर पनि सुझाव आएका छन् । सबै कार्यालय बन्द गर्ने होइन । केही सेवा पर सार्ने कि भनेर छलफल चलिरहेको छ । सुझाव लिइरहेका छौं । कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं,” उनले भने ।
कोरोनाबाट थप ११ जनाको मृ’त्यु [ विवरणसहित ]
कोरोना खोपलाइ लिएर WHO ले भर्खरै दियो यस्तो खबर ! छायो विश्वभर खुसियाली !